PO Box 61950 Nairobi
Tel: 254-2- 441225
Fax: 254-2- 442438
Somalia Aid Coordination Body
URURKA ISU-DUWIDDA GARGAARKA SOOMAALIYA (SACB) WAXA UU AAD UGA WALAACSAN-YAHAY XAALAKA AMMAANKA IYO KAN AADAMINIMO EE GOBOLKA GEDO EE SOOMAALIYA
Nairobi (18kii April 2002da) – Ururka Isu-duwidda Gargaarka Soomaaliya oo ka kooban hey’adaha aan dowliga ahyn, hey’adaha Qaramada Midoobey iyo dowladaha deeqda baxshay waxa ay si aad ah iskugu shuqlinayaan xaalka ka sii daraya ee gobolka Gedo ee Soomaaliya. Waayadan dambe waxa gobolka ku soo kordhayey qul-qulatooyin dagaal la socdo, kuwaas oo keeney dil, dhaawac iyo iyadoo dad badan ay ka barakaceen guryahoodii. Waxa kale oo dagaaladaasi ay si xun u hor joogsadeen gargaarkii aadaminimo ee sida weyn loogu baahnaa ee heya’daha samafalku ay u gudbin jireen kumannaanka dad ee baahidoodu soo kordheyso.
Ururka Isu-duwidda Gargaarka Soomaaliya (SACB) waxa uu si xoog leh u dhaleeceenayaa dilkii dhawaanta Gedo lagu dilay mudane Nur Maxamed Yusuf oo ahaa sarkaal sare oo la shaqeenayey heyad samafaleed oo caalami ah. Mudane Yusuf waxa dagaalada haatan socda lagu dilay maalintii 11kii April ee sanadkan. Waxa kale oo SACB ay dhaleeceenaysaa dhimashada ku timid dad badan oo aan dambi galabsan oo ku dhex dhintey hubkii la iski ridayey.
Waxa SACB ay si gooniya uga walaacsan tahay dhaq-dhaqaaqa hubka gobolka Gedo dhexzdiis kor iyo hoos loo wado, oo ka marag kacaya in la isku diyaarinayo dagaallo kale. SACB waxa ay dhinacyada Gedo isku haya ugu yeereysaa in ay joojiyaan dagaalada si dib loogu furo waddooyinkii la marsiin jirey gargaarka aadaminimo oo haatan xiran. Haddii aan dib loo furin wadiiqooyinkii la marsiin jirey gargaarka aadaminimo dad badan oo kale ayaa dhiman doona.
Gobolka Gedo waxa si kulul u saameyey saddex sano oo isku xigta oo dalagii beeruhu uu xumaadey iyo iyadoo xasilooni daro isdaba joogta ay gobolka ku habsatey. Shicibka gobolku aad ayeey u dayacan yihiin waxana noloshoodu ay si weyn ugu tiirsan tahay cuntada gargaarka ah ee dibadda looga keeno. Qulqulatooyinka iyo rabshadaha haatan socda waxa ay sababeen in kumanaan shacabka ka mid ahi ay guryahoodi dibadda uga yaacaan, taasoo sii xumeenaysa xaaladihii awalba adkaa.
SACB waxa ay ku qasan tahay in ay ogaato in kuwa gacanta ku haya maamulka hoose ee Gobolka Gedo, sida uu dhigayo sharciga caalamiga ay ku qasban yihiin in ay dhowraan danaha guud ee dadka ku nool goobaha ay maamulaan, ayna ku qasban yihiin in ay wadooyin u helaan gargaarka aadaminimo, sugaan ammaanka shaqaalaha barnaamijyada aadamha iyo ilaalinta gargaarka aadaminimo iyo kuwa ka faa’iideysanaya laf-ahaantooda.
SACB waxa ay filaysaa in masuuliinta gudaha, ganacsatada, iyo kuwa kale ee doorka weyn ku leh arimaha gobolada koonfureed ay garowsan doonaan mas’uuliyadda ka saran kuwa noloshoodu ay sida weyn ugu xiran tahay gargaarka aadaminimo oo deg deg u soo gaara.
Ugu dambeyn, Ururka Isu-duwidda Gargaarka Soomaaliya (SACB) waxa uu taageerayaa isla markaana dhiiri-galinyaa dadaalada la xiriira nabadda ee lagu goobayo laguna hubinayo in nabaddu ku saleynaato aadaminimo. Waxa kale oo SACB ay shicibka gobolka ugu yeereysaa in la kordhiyo dadaalada loogu jiro in lagu nabadeeyo gobolka.
Haddii aad wara intaas ka faah-faahsan doonaysid, fadlan, la xiriir gabarta la yiraa Maura Barry, madaxa xogeynta SACB, Tel (254-2) 448434, Fax: (254-2) 442438